आकाशे रङको रुमालले नेतालाई चिनाएको त्यो क्षण
काठमाडौंबाट फर्कंदा इटहरी चोकभन्दा पश्चिमतर्फ म बसपार्कमा उभिएँ । मेरो हातमा एउटा हल्का आकाशे रङको रुमाल थियो । त्यही रुमालले मुख पुछेजस्तो गर्दै नजानिँदो गरी प्रत्येक गाडीबाट ओर्लँदै गरको मानिसलाई हेरिरहेँ । त्यो बेला हामी सिआइडीलाई झुम्के भन्थ्याँै ।
बासु दाहाल पनि हातमा रेन्ची बोकेर यताउता गर्दै थिए । बासुलाई मैले यताउता झुम्के त छैनन् भन्दा उनले देखेको छैन भने । हामीलाई चिन्ने झुम्के छन् कि भनेर सतर्क थियौँ । मलाई अलिकति सङ्केत थियो । त्यहाँबाट आउने नेतामध्ये एक जना पार्टीको महासचिव आउँदै हुनुहुन्छ । मेरा लागि त्यहाँ उभिनु त्यत्तिे सजिलो थिएन । यदि झुम्केले मलाई देख्यो भने मलाई भन्दा पनि नेताहरूलाई खतरा हुने थियो । बासु दाहाल र म निकै होशियारीका साथ त्यहाँ खटिएका थियौं ।
बुटवलबाट आउने गाडी आइपुग्यो । कालो टोपी लगाएको हँसिलो मानिस गाडीबाट रुमाल हल्लाउँदै त्यही गाडीको ढोकामा उभिएर यताउता हेरे । यताबाट मैले रुमाल हल्लाएँ । त्यस पछि उनी गाडीबाट झरे । उनको पछाडि मोटो फेन्टम टोपी लगाएको मानिस पनि ओर्लिए । रुमाल हल्लाउँदै मैले उनीहरूलाई बासुको पछाडि लाग्न सङ्केत गरे । बासुजीले उनीहरूलाई पूर्व बस स्टेनसम्म लैजानुपर्ने भने । त्यहाँ पनि रुमाल बोकेको साथीलाई जिम्मा लगाएर उनी फर्किए । उनीहरू दुई जनालाई लिन मोरङबाट अर्को साथी आएर पर्खिएका थिए । बासु गइसकेपछि बस स्टेनमा म एक्लै भएँ ।
उनीहरू गएको आधा घन्टापछि काठमाडौंबाट आउने गाडी आएर रोकियो । ढोकामा एक जना अग्लो गोरो मानिसले ढोकामा उभिएर रुमाल हल्लाउँदै परपर हेरेको देखँे । मैले बुझेँ उनले मलाई नै खोज्दैछन् । मेरो हातमा भएको रुमाल मैले पनि हल्लाएँ । मलाई देखेपछि उनले अर्काे साथीलाई पनि बोलाए । उनीहरूलाई एउटा रिक्सामा बस्ने इशारा गरेँ । म अर्को रिक्सामा बसेर हामीहरू पूर्व लाग्याँै । हामी लेखनाथ गौतम दाइको घरमा पुग्याँै । मैले लेखनाथ दाइकोमा गएर सबै व्यवस्था गरेँ । पार्टीका नेताहरू बसबाट ओर्लिएपछि सुरक्षित ठाउँमा पु¥याउनु थियो । त्यहाँ आएमध्येका कसैसँग पनि हाम्रो चिनजान थिएन । हामीलाई त्यही रुमालले चिनाइदियो । मैले नेताहरूलाई चाहिने दैनिक उपभोगका सामानको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट निस्केँ ।
अझै एक जना साथिलाई मैले सिर्जनशील पुस्तक अगाडिबाट ल्याउनु थियो । म सो पुस्तक पसलमा पुग्दा एक जना मानिस पत्रिकाले अनुहार छोपेर पत्रिका पढ्दै गरेको देखेँ । मैले खोकेर रुमाल हल्लाएँ । मेरो खोकी सुनेर उनले मलाई पुलुक्क हेरे । मैले रुमाल हल्लाइदिएँ । त्यसपछि चिनेँ उनी त पहिले नै हाम्रो घरमा आएका थिए । उनलाई लिएर म खगिन्द्र सिग्देलकोमा गएँ । उनलाई त्यहीँ छाडेर सबै कहाँकहाँ हुनुहुन्छ भनेर सूचना गरँे । म विपिनकोमा गएर बसँे । उनीहरूलाई लिन अरु साथी आउने योजना थियो ।
ती साथीहरू सबै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् भन्ने हामीले अन्दाज गरेका थियाँै । पछि पहिलो जनआन्दोलन सकिएपछि मात्रै सबैलाई चिनेँ । बुटवलको गाडीबाट आएका २ जनामा होचा र हँसिला अनि कालो टोपी लगाएको जीवराज आश्रित रहेछन् भने अर्का वामदेव गौतम रहेछन् । काठमाडौंबाट आएका ३ जनामा एक जना अग्लो गोरो मानिस तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनाल र अर्को गोरो अग्लो अमृत बोहोरा रहेछन् । होचो, घोप्टे जँुगा भएको माधवकुमार नेपाल रहेछन् । सबैभन्दा पछाडि मैले खगिन्द्र सिग्देलकोमा लगेका व्यक्ति ईश्वर पोखरेल रहेछन् । त्यसपछि उनीहरूसँग भेटघाट भइरहे पनि वास्तविक नाम जनआन्दोलनपछि मात्रै थाहा भयो ।
पार्टीको काम सकिएपछि म आफ्नो कामतिर लागे । तर, अब फेरि मैले उनीहरू सबैलाई इटहरीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्काउनु थियो । इटहरीका कुनै पनि साथीलाई ती साथीहरूको पार्टीको नाम पनि थाहा थिएन । त्यो बेला हामिले यति बुझेका थियौँ । यी पार्टीका केन्द्रीय नेता हुन् । उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले बैठकमा पु¥याउनु र व्यवस्थापन गरी फर्काउनु हाम्रो कर्तव्य थियो ।
आएको ४ दिनपछि काठमाडौं जान २ वटा र बुटवलका लागि २ वटा सीट बुक गर्न भनिएको थियो । बाँकी साथीहरू इटहरीमा नै बस्नुहुने थियो । इटहरी बस्ने ३ जना भने आफ्नै हिसाबले जाने योजना रहेछ । फर्कने बेलामा पहिले बसेको ठाउँबाट २ जना नेताहरू झलनाथ खनाल र अमृत बोहरालाई लिएर आएँ । यता जीवराज आश्रित र वामदेव गौतम पनि त्यहीँ आएका थिए । वामदेवले एउटा झोला पछाडि भिरेका थिए । हाफपेन्ट र छत्रे टोपी लगाएका थिए । मैले काठमाडौं जाने गाडीको सिट बुक गरेको थिएँ । तर, त्यहाँको बुकिङले काटिदिएको टिकट कम्पनीले अन्तै बेचिदिएछ । गाडी अन्तै भरिएर आएको थियो ।
हातमा टिकट र झोला बोकेर नेताहरू आफ्नो सिट खोज्दै गाडीभित्र गए । त्यहाँ पुग्दा सिटमा अरु नै मान्छे बसेका थिए । उनीहरू धरानबाट नै आएका रहेछन् । गाडीबाट बाहिर निस्किएर गोरो र अग्लो मानिसले गाडीको बुकिङलाई बोलाएर त्यो टिकट दिए । यो सिट हामीलाई चाहियो भने पछि बुकिङ छक्क प¥यो किनकि त्यो सिट खाली थिएन । ‘यो सिट इटहरीको भन्दै टिकट काट्न हामीलाई दिएको छ । अनि अब उतै मानिस पाएपछि भरेर पठाइदिएछ । सर, नरिसाउनुस् हामी अर्को गाडीमा पठाइदिन्छाँै,’ बुकिङ गर्नेले भन्यो ।
‘जान त हामी आफैँ टिकट काटेर जान सक्छाँै । तर मैले तपाईंहरूको अधिकार खोसिएकोमा चिन्ता गरेको हुँ । तपाईंहरूले आप्mनो अधिकार त खोज्नुप¥यो नि । तपाईंहरूलाई सधैँ यस्तै भयो भने कसले विश्वास गर्छ त ? सबाल त्यो हो’, नेताले भने, ‘हामीले अर्को गाडीमा राम्रो सिट पाएनौँ भने अलिअलि दुःख पाउँला । हामी पुग्छौँ । तर, तपार्इंहरूसँगको हाम्रो विश्वास त गुम्यो नि ।’
यसो भन्दै गर्दा उताबाट जीवराज आइपुगे । ‘के भयो ? तपाईहरू त यहीँ हुनुहुँदोरहेछ । जानु भएको रहेनछ,’ उनले भने, ‘के गाडी पाइएन ?’ यताबाट झलनाथले हाम्रो सिटमा अरु नै बसाएछन् भने । जीवराजले भने, ‘यी बिचरा भाइहरूको के दोष ? कम्पनीले अलिकति फाइदा भयो भने यिनीहरूको कोटाको टिकट अन्तै बेचिदिन्छ । यो नियम र कानुन नमान्ने मुलुकमा जसले जे गरे पनि हुन्छ । यो देशको सरकारमा बसेकाहरू सरकारका वरिपरीकाहरूले कानुन नियम केही मान्नुपर्दैन,’ जीवराजले भने, ‘हाम्रो राजा जिन्दावाद भनेपछि मानिस मार्दा पनि छुट पाइने मुलुकमा तपाईं हामीजस्ता बबुराको के लाग्छ र ? अनि नियम पालना गर्नुपर्ने यी भाइहरू जस्ताले मात्र हो । यिनीहरूको नाइकेले न नियम मान्छ न कानुन । दुख पाउने पनि तलकै र गाली खाने पनि तलकैले । यस्तै छ यहाँको तरिका ।’
कुरा सुनेपछि बुकिङले होमा हो मिलाइदियो । त्यही बेलामा मोरङ पशुपति बस आएर रोकियो । त्यसमा इटहरी कोटाकको ३ र ४ नम्बरको सिट खाली रहेछ । तिनै दुइटा सिटको टिकट काटेर झलनाथ र अमृत बोहोरालाई बसाइदिएँ । त्यसपछि फेरि जीवराजले भने, ‘उहाँहरूले त राम्रो सिट पाउनु भएछ । तपाईंहरू सिट पाइएन भनेर छटपटिइरहनुहुन्थ्यो । तर अब त हामी गयौँ । तपार्इंहरूको गाडी कुन बेला आउने हो ? गाडी पाइएन भने काठमाडांैकै गाडीमा हेटौंडासम्म जाउँला भन्नुभयो । (उहाँहरू जीवराज र वामदेव हो भन्ने पछि मात्र मैले चिनेको हो ।)
उही हाफपेन्ट र फेन्टम टोपी लगाएको अनि पछाडि झोला बोकोको लाहुरेजस्तो लाग्ने र होचो मान्छे दुवै जना बुटवल जाने रहेछन् । त्यो बेला कसैसँग मेरो चिनजान थिएन । खाली त्यही एउटा रुमालले हामीलाई चिनाइदिएको थियो । जीवराजले गाडी आउञ्जेल यताको अवस्था बारेमा सोधेका थिए । मैले भनेँ, ‘हामी सङ्गठन निर्माण गर्दैछौँ । उनको चासो थियो । इटहरी बजारको काम कस्तो छ भन्नेमा । हामीले सबै क्षेत्रमा सङ्गठन बिस्तार गरिरहेको र आवश्यक पर्दा १५÷२० जना साथीलाई राख्न सक्ने गरी सेल्टर निर्माण भएको बताएँ । त्यस्तै वरपरका गाउँहरूमा राम्रो सङ्गठन बिस्तार भइरहेको पनि बताएँ । किसान, विद्यार्थी, मजदुर, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक सबैलाई सङ्गठित पारिरहेको जानकारी गराएँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको पनि राम्रो उपस्थिति रहेको उल्लेख गरेँ । हामीले यी कुरा गर्दागर्दै बुटवल जाने गाडी आयो । उनीहरू दुवैलार्ई गाडीमा चढाएर पठाएँ ।
उनीहरू गएपछि म फर्किएर लेखनाथ दाइकोमा गएँ । त्यहाँ २ जना साथीहरू आउने जानकारी थियो । म पुग्दा एक जना साथी आएर बसेका रहेछन् । खुट्टा सुन्निए अनि दुखे भनेर तातो पानी तताएर धुन लागेका थिए म पुग्दा । उनीहरूलाई गाडीमा चढाउन केहि गर्नुपरेन । ‘म यो बाटो धेरै हिँडेको छु म आफै जान्छु’ भने एक जनाले । उनी हेटौडा जाने गाडी पाइए त्यसैमा जाने भए । अर्का साथी पहिले काम गरेको ठाउँ विराटनगर जाने भनेर उतै लागे ।
अब हाम्रो काम पूरा भयो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सजिलो थिएन । किनभने हामीले पठाएका सबै साथीहरू भूमिगत थिए । त्यसमा सरकारको निगरानी सूचीमा रहेका साथीहरू थिए । यता म पनि प्रशासनको निगरानीमा थिएँ । त्यहाँ कोही एक जना पनि समातिएको भए त्यसको सबै दोष हामीले बोक्नुपथ्र्यो । वासुलाई भनेँ, ‘कमरेड हाम्रो जिम्मेवारी पूरा भयो । हेर्नु यस्तो मध्य बजारको बीचमा यति साथीहरू व्यवस्थित ग¥र्यौँ ।’ बासुले भने, ‘हो त । अहिले पो मेरो अङ जिरिङ्ग हँुदैछ ।’
त्यसपछि पङ्कज (पछि थाहा भयो उनी रहेछन् तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनाल) फेरि आए । उनी पार्टीको प्रान्तीय कमिटिको बैठकमा आएको बेलामा म सिर्जनशील पुस्तकमा लिन गएँ । साँझ परेको थियो । उनी मेरो हात समातेर हिँडे । उनले आफूलाई नछोड्न मलाई सचेत गराएका थिए । मलाई नछोडनुस् भने । हामी बसमा चढ्यौँ । हामी बसमा चढेको कसैले हेर्दैथियो । त्यसैले हामी सोझै तरहरा गयौँ । त्यहाँबाट कृषि क्षेत्रभित्र पस्यौँ । हाम्रो पछि कोही छैन भन्ने पक्का भएपछि हामी घरमा आयौँ ।
बाटोमा उनले आफ्नो जेलजीवनबारे संक्षिप्तमा बताए । जेलमा हुँदा पुलिसले यातना दिएको उनले बताए । हामीले पार्टी सङ्गठन निर्माण र सङ्घर्षबारे पनि कुरा ग¥यौँ । रातिको खाना खाउञ्जेल कुरा गर्याैँ त्यसपछि उनी पढ्न थाले । कुन बेलासम्म पढे भन्ने थाहा भएन । बिहान बुबाकोमा लिएर गएँ । दिनभरि उनी त्यहीँ बसे । त्यहाँ बस्नु सुरक्षित थियो । साँझमा उनी अर्का साथी लिएर आए ।
पछि पनि उनी आएर बसे । दिउँसो ३ बजे नै इटहरी लैजाँदा मानिसले बाटमा मलाई निकै सोधे । मैले उहाँ तेह्रथुम सिंहवाहिनीको हेडसर हो । काठमाडौं हिँड्नुभएको भनेर गाडी चढाएको थिएँ । त्यो बेला बस्दा उनले पार्टीको कार्यक्रम, कार्यनीति, पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताबारे छलफल गरेका थिए ।
पहिलो जनआन्दोलन सकिएपछि नेकपा (माले) सुनसरीको पहिलो जिल्ला अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि पार्टी महासचिव मदन भण्डारी र विशेष अतिथि सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित थिए । मैले उनलाई अन्तिम पटक त्यही अधिवेशनमा भेटँे । उनीहरू सबैको परिचय त्यतिबेला खुल्यो जब सबै नेता खुला राजनीतिमा आए । त्यसपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पनि खुल्यो । यी सबै नेतालाई त्यही हल्का आकाशे रङको रुमालले हामीलाई चिनाएको थियो ।